(Emelitere ikpeazụ On: 03/12/2019)
Cheta na oyi ọnwa bụ obi ọjọọ n'akụkụ ndị ọzọ nke Afrika. snow, mkpurummiri na ịnwụ n'oké oyi eme ka ọ na ihe ịma aka na egwu maka ọkwọ ụgbọala na ịnyagharịa ụzọ. Bọs ma ọ bụ ụgbọ ala pụtara n'atụghị ụjọ oyi ihu igwe na oké okporo ụzọ. The ụzọ na-amị amị, na a ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ ala nwere ike slide nchịkwa.
N'agbanyeghị nke dreary, kentuoyi weather, Paris na-anọgide a dream ebe isua gburugburu. Ọ dịghị mkpa na-atụ uche si na niile na Paris nwere na-enye nanị n'ihi na nke colder ihu igwe. Ebe a bụ ihe mere ị ga-eleta Paris na oyi oge na ihe mere ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ ụzọ kasị mma na-e:
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ kasị mma na-esi na Paris, ị ga-ahụ na ụgbọ okporo ígwè eme njem bụ otú ime ya comfortably na conveniently. Ọ bụrụ na ị na-ebi Europe ma ọ bụ gawa Paris si a European obodo, multiple elu-ọsọ ụgbọ oloko gaa na nke Paris ụbọchị ọ bụla. Ndị na-esonụ ndepụta na-egosi otú ngwa ngwa ị nwere ike na-abata na Paris site na ụfọdụ nke Europe obodo ukwu nile mgbe ị na-ahọrọ otu n'ime ọtụtụ elu-ọsọ ụgbọ oloko dị:
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị a n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/train-travel-winter-paris/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)